Khasaare intee le’eg ayuu geystay dabkii shalay baabi’yey qeybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha? Daawo sawirro galabta laga sooqay…. | kowtharmedia.com
Home WARAR Khasaare intee le’eg ayuu geystay dabkii shalay baabi’yey qeybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha? Daawo sawirro galabta laga sooqay….
Khasaare intee le’eg ayuu geystay dabkii shalay baabi’yey qeybo ka mid ah Suuqa Bakaaraha? Daawo sawirro galabta laga sooqay….
Feb 28, 2017WARAR
Dab xoog badan oo socdayna saacado badan ayaa shalay dhulka la simay qeybo badan oo ka mid ah suuqa Bakaaraha oo ah kan ugu weyn ganacsiga Soomaaliya, wallow inta Salaad Subax oo la hur´hurdaayay waabaragii Dab laqabasiyay Xarumo Ganacsi.
Qeybaha gubtay ee hantida badan ay taallay ayaa waxaa ka mid ahaa suuqa loo yaqaano Khaliifa oo ka koobnaa illaa 85 dukaan, qeybaha hilibka, maacuunta, bagaashka iyo meelo.
Inkastoo aan tirakoob rasmi ah laga heynin hantida ku gubatay Suuqaasi ayaa haddana waxaa la qiyaasayaa in khasaare aan ka yareyn labaatan milyan oo dollar uu geystay dabkaasi.
Ganacsatada ku hanti belay dabkan ayaa waxaa soo wajahay xaalad adag iyo murugo, waxaana qaarkood ay sheegeen in wixii hanti ahaa ay lahaeyeen uu dabku salfaday, aysana heysanin wax ay xitaa reerahooda dabka ugu shitaan.
Qeybaha uu dabku saameeyey ee Suuqa Bakaaraha ayaa isku bedelay dhul banaan oo ay daadsan yihiin haraaga jiingadihii iyo waxyaabihii kale ee loo adeegsaday dhismaha dukaamada iyo bakhaarada gubtay.
Maahan markii ugu horeysay ee dab sidan u weyn uu qabsado Suuqa Bakaaraha, sanadihii 1996, 2002, 2007 iyo 2009kii ayaa la xusuustaa in dab khasaare aan yareyn dhaliyey uu qabsaday Suuqaasi.
Previous PostWar Deg Deg ah Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah u ansixiyay Ra’isul wasaaraha Soomaaliya!! Next PostMuuqaal: Odayaal ku shiray Laascanod oo Maamulka S.land u diray Hanjabaad DAAWO!!